"Waxaa la joogaa xilligii dadka Amxaaradu ay cagta marin lahaayeen argagixisada, qof kasta waa inuu diyaar u noqdaa inuu is difaaco" ayuu yiri madaxa nabadda iyo amniga ee gobolka Amxaarada Sema Tiruneh oo la hadlayay warbaahinta gobolkaas.
Afhayeenka ciidamada Tigray Getachew Reda oo ka jawaabayay hadalka Sema Tiruneh ayaa u sheegay Associated Press "soo dhoweyn diirran ayaan u samayn doonnaa."
In kasta oo Qaramada Midoobey iyo Mareykanku ay qeylo dhaan ka muujinayaan go'doominta dowladda Itoobiya ay ku hayso gobolka Tigray iyo dadkeeda Lixda milyan oo qof ah, haddana ciidamada Tigreegu waxay wacad ku mareen inay sugi doonaan ammaanka gobolka, ayna baacsanayaan waxay ugu yeereen "cadowga Tigray".
Waxay sheegeen in mid ka mid ah shuuruudaha horudhaca ah ee wadahadal ay la galaan ay tahay is-casilaadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya ayaa ka digtay in soo galitaanka ciidamada Tigreega ee Amxaarada iyo Canfarta “ay tijaabinayaan dulqaadka dowladda federaalka, ayna ku khasbeyso inay bedesho difaacad ay gashay xabaddjoojinta ka dhaqangashay dhinacooda xaaladda bini'aadamnimada aawadeed".